Arts & Humanities » ရဲရဲနီတဲ့ သွေးစက်တို့ရဲ့ ရာဇဝင်	10
Posted by Thint Aye Yeik on Jun 27, 2015 in Arts & Humanities, Creative Writing, Critic, History, My Dear Diary, Poetry | 10 comments
မြစပဲရိုး says: . ကျုပ် ခေါ်ထုတ်ချင်တာ က မရှိမှ သိ တတ် တဲ့ လူများ အတွက်။
မြစပဲရိုး says: Credit – Su Da (မြစ်သား)
Alinsett @ Maung Thura says: ကျနော်လည်း fb မှာ အဲ့ဒါလေး ဖတ်မိပြီးကတည်းက
Ma Ma says: အဲဒီဘုန်းကြီးက ရွှေတောင်ကုန်းကျောင်းက ပါ။
Ma Ma says: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203280587255789&set=pcb.10203280589495845&type=1
Was this answer helpful?LikeDislike This solution has been deemed correct by the post author
ဇီဇီခင်ဇော် says: Credit to Theka Moe Nyo
အောင် မိုးသူ says: ရဲရဲနီတဲ့
Alinsett @ Maung Thura says: အို ဘာတဲ့. . .
Mike says: .ကဗျာလေးကိုကြိုက်သကွာ
Alinsett @ Maung Thura says: ဟုတ်။